Ukufakwa kophawu lwemishini
Ukufakwa Kwemishini Yokwemishini Indlela yokufaka yophawu lomshini iyahluka ngohlobo lwesimakhenikhi nohlobo lomshini, kepha okubalulekile kokufakwa kucishe kufane. Uphawu Mechanical ingenye m eziyisisekelo ...
Ulwazi lokuhlolwa kwezimpawu zenjoloba
Ulwazi Lokuhlolwa Kwezimpawu Zenjoloba 1. Ziyini izinto zokuhlola zezimpawu zenjoloba? 1) Hlola ukuthi umkhiqizo uhlanzekile yini. 2) Hlola ukuthi umkhiqizo unezinkinga ze-vulcanization; 3) Hlola ukuthi ngabe umkhiqizo usikiwe / uhleliwe yini ...
Umehluko Phakathi Kwemikhiqizo Ebunjiwe Yenjoloba Nemikhiqizo Eyandisiwe Ngokuthuthuka okusheshayo komkhakha wokukhiqiza, imikhiqizo yenjoloba isetshenziswa kabanzi. Ngemikhiqizo yenjoloba nepulasitiki engabonakala yonke indawo, ...